Mpempe akwụkwọ: Ndepụta nke ndị na-ahụ maka Intaneti Egwuregwu Iji Tụlee
Na ụlọ ahịa ahịa nke oge a, nhazi nke ọma na ntụgharị data dị ọcha ịghọ ọrụ dị egwu. Ụfọdụ ndị na-edebe ebe nrụọrụ weebụ na-egosi data na ụdị mmadụ nwere ike ịhazi, ebe onye nke ọzọ anaghị arụpụta ụdị data dị iche iche nke nwere ike ịmepụta ngwa ngwa.
Nchịkọta weebụ na igwu egwu bụ ọrụ ndị dị mkpa ị gaghị eleghara anya dịka onye na-elekọta weebụ ma ọ bụ blogger. Python bụ obodo kachasị elu nke na-enye ndị nwere ike ịnweta ngwá ọrụ ntanetị weebụ, ịkụzi nkuzi na usoro ihe omume bara uru.
E-azụmahịa weebụsaịtị na-achịkwa dị iche iche usoro na atumatu - nokian talverehvid. Tupu ị na-agba ma na-ewepụta data, gụọ okwu ahụ nke ọma ma na-agbaso ha mgbe niile. Imebi ikikere na ikike nwebisiinka nwere ike ibute nkwụsị ma ọ bụ ịtụ mkpọrọ. Ịnweta ngwaọrụ ndị kwesịrị ekwesị iji kpochapụ data maka gị bụ nzọụkwụ mbụ nke mkpọsa nchọta gị. Nke a bụ ndepụta nke Python crawlers na internet scrapers ị kwesịrị ị na-eche.
MechanicalSoup bụ ụlọ akwụkwọ na-ekpochapụ nke ukwuu nke e nyere ikikere ma kwenye na MIT. E mepụtara MechanicalSoup site na Mma Ofe, akwukwo ozo nke HTML nke dabara na webmasters na ndi na-ede blọgụ n'ihi ọrụ dị mfe ya. Ọ bụrụ na mkpa gị na-adịghị achọ ka ị rụọ ihe ntanetị ịntanetị, nke a bụ ngwá ọrụ iji gbaa ọwa.
Nlekọta bụ ngwá ọrụ na-agba agba maka ndị ahịa na-arụ ọrụ na mmepụta ngwá ọrụ weebụ ha.Ngwurugwu a na-akwado obodo iji nyere ndị ahịa aka ịzụlite ngwá ọrụ ha nke ọma. Nlekọta na-arụ ọrụ n'ịwepụta data sitere na saịtị na ụdịdị dị ka CSV na JSON. Scanning internet scraper na-enye webmasters site na ngwa ngwa mmemme nke na-enyere ndị ahịa aka n'ịhazi ọnọdụ nchapu nke onwe gị.
Nlekọta nke gụnyere njirimara na-arụ ọrụ nke ọma na-eme ihe ndị dị otú ahụ dị ka ịkwanye na njikwa kuki. Usoro ọgwụ na-ejikwa ọrụ ndị ọzọ dị ka Subreddit na IRC. Enwere ike ịchọta ozi gbasara ọgwụ na GitHub. E nyere ikikere ọgwụ na ikikere nke 3. Idozi abụghị maka onye ọ bụla. Ọ bụrụ na nzuzo abụghị ihe gị, tụlee iji nsụgharị Portia.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na njikwa onye ọrụ weebụ, Pyspider bụ ihe ntanetị ịntanetị iji tụlee. Site na Pyspider, ị nwere ike ịchọta ma ọ bụ otu na ọtụtụ ihe ntanetị weebụ. Pyspider bụ nke ukwuu na-atụ aro maka ndị ahịa na-arụ ọrụ na iwepụta data buru ibu site na weebụsaịtị. Pyspider internet scraper na-enye ihe ndị dị mkpa dị ka iweghachi akwụkwọ na-adaba, saịtị nchapu site na afọ, na databases ndabere nhọrọ.
Pyspider web crawler na-eme ka ọ dịkwuo mfe ma kpochapụ ngwa ngwa. Igwe ihe ntanetị a na-akwado Eke Ọgba 2 na 3 n'ụzọ dị irè. Ugbu a, ndị mmepe ka na-arụ ọrụ na-emepe atụmatụ Pyspider na GitHub. A kwadoro pirpider internet scraper na ikikere n'okpuru Apache nke 2 licence kpuchie.
Nkọwa ihe nchọgharị Python ọzọ iji tụlee
Lassie - Lassie bụ ngwá ọrụ ntanetị nke na-enyere ndị ahịa aka iwepụta okwu mkparị, aha , na nkọwa site na saịtị.
Cola - Nke a bụ ihe ntanetị nke na-akwado Python 2.
RoboBrowser - RoboBrowser bụ ọbá akwụkwọ nke na-akwado ma Python 2 na 3 nsụgharị. Ihe ntanetị weebụ a na-enye atụmatụ dị ka ụdị-ejuputa.
Ịmata njide na ịkụcha ngwaọrụ iji wepụ ma kesaa data bụ nke kachasị mkpa. Nke a bụ ebe Python internet scrapers na crawlers na-abata. Python internet scrapers na-ekwe ka ndị ahịa na-ehichapu ma chekwaa data na nchekwa data kwesịrị ekwesị. Jiri ndepụta ndị dị n'elu na-akọwapụta ihe kacha mma Python crawlers na internet scrapers maka mgbasa ozi gị.